Madaxwaynayaasha Jabuuti & Somalia oo kulmay + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Madaxwaynayaasha Jabuuti & Somalia oo kulmay + Sawirro
Madaxwaynayaasha Jabuuti & Somalia oo kulmay + Sawirro
(Jabuuti) 19 Agoosto 2019 – Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta magaalada Jabuuti ku yeeshay wadahadallo ku aaddan sare u qaadidda xiriirka xooggan ee labada dal.
”Madaxweyneyaashu waxay ku heshiiyeen in la sii dardargeliyo iskaashiga labada dal oo ah mid ku dhisan walaaltinnimo iyo wax wada qabsi” ayuu u dhignaa war kasoo baxay dhanka DF Somalia.
Labada dhinac sooma saarin wax kale oo intaa dhaafsiisan oo ku saabsan kulankooda.
MW Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka qayb gelayo sanad-guuradii 19-aad ee kasoo wareegtey shirkii dib u heshiinta Somalia, oo ay ka dhalatay dowladdii Cabdi Qaasim oo waloow aanay si saaxi ah u shaqaynin misna gundhig u noqotay soo noqoshada dowladnimada Somalia oo xilligaa kahor gebi ahaanba meesha ka maqnayd tan iyo 1991-kii.
Previous articleMadaxwaynihii la tuuray ee Suudaan oo maanta Maxkamad lasoo taagey!!
Next articleAAN FARAGELINNO: ”3 nin oo Kenyan ah ayaa ka qayb gelaya doorashada Jubbaland!” – Saxaafadda Kenya oo si qaawan uga hadlaysa arrimaha maxalliga ee Somalia (Maxaa la guddboon DF Somalia?)